Soomaali laga soo musaafuriyay Mareykanka oo gaaray Muqdisho Muqdisho 17 Apr, 2012Sagaal nin oo Soomaali ah oo qaarkood muddo ka badan sanad ku xirnaa waddanka Mareykanka, ayaa shalay laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha caalamiga ah Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Raggaan oo dhammaantood laga soo musaafuriyay waddanka Mareykanka ayaa waxay la socdeen diyaarad laga soo saaray garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi, halkaas oo ay keentay diyaarad ka soo qaadday waddanka Mareykanka. Raggan ayaa markii ay ka soo dageen garoonka waxaa xiray ciidamada nabad sugidda dowladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya, iyagoo ku sameeyay baaritaan la xiriira inay yihiin dad horay dambi uga galay dalka iyo in kale, inkastoo markii dambe la sii daayay.
Cabdullahi Gaafoow Maxamed, taliyaha laanta socdaalka iyo jinsiyadaha DKMG Soomaaliya ayaa Raadiyo Ergo u sheegay in dadka la soo celiyay ay dalkoodii dib ugu soo laabteen. Wuxuu intaa raaciyay inay isa soo tarayaan dadka dib loogu soo celinayo Soomaaliya, iyadoo maalmihii la soo dhaafay la soo celiyay illaa soddomeeyo ruux oo Soomaali ah.
"Maalmahan waa isa soo tarayeen dadka soomaaliyed ee dib loo soo celinayay, shalay waxaa nala soo xiriiray safaaradda Mareykanka, dhalinyarada la soo musaafuriyay markii halkan ay yimaadeen waan baarnay waana sii deynay, sabab aan u celinno ma lahan, dalkooda ayay ku soo laabteen." ayuu yiri Gaafow.
Wuxuu sheegay in dadka Soomaaliyeed ay isugu jiraan kuwo loo diidayo sharciga ee la soo tarxiilo iyo dad si sharci darro ah dalalka ku gala, waxaana uu tilmaamay in muddooyinkii u dambeeyay shakiga falalka argagixiso uu ku batay dalalka reer galbeedka, taasna ay sabab u noqotay in Soomaalida loo diido sharciga dalalka qaar.
"Toddobaadkii la soo dhaafay diyaaradda Turkish Airline ayaa 14-ruux keentay oo sharci ma siineyno ay dhaheen Turkiga, waxaa kaloo jira kuwo kale oo meelo kala duwan iyagana laga keenay, marka waxaa batay dhibaatooyinka dalalka qurbaha ee argagixisada la xiriira" ayuu yiri Gaafow.
Musaafurinta noocaan oo kale ah, ayaa waxaa horay looga bartay Boqortooyada Sacuudi Carabia oo dalkeeeda ka soo musaafurisa Soomaali badan, kuwaasoo ay dib ugu soo celiso Soomaaliya. Yuusuf Axmed Abuukar (Keynaan)/AA/MG/FM
Maxaabiis Soomaaliyeed oo ku dhibaataysan xabsi ku yaal xuduudka Angola la wadaagto Namibia
Askar Somaliland ka tirsan oo la xiray iyaga oo dad tahriibinaya
Koofur Africa oo bilowday musaafurinta Soomaalida
Soomaalida ka soo noqonaysa Koofur Afrika oo ay tiradoodu sii kordhayso
Qiimaha miraha ka soo baxa Beeraha Soomaaliya